धूमपानरहित दिवसमा विभिन्न कार्यक्रम
प्रस, वीरगंज, १८ जेठ/ विश्व धूमपानरहित दिवस आज वीरगंजमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर मनाइएको छ । नेपाल अर्बुद रोग निवारण संस्था पर्साको आयोजनामा घण्टाघरबाट र्‍याली आयोजना गरेर नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा पुगेर समापन भएको थियो । अर्बुद रोग निवारण संस्थाले आयोजना गरेको र्‍यालीमा धूमपानविरुद्ध विभिन्न नाराहरू लेखिएको प्लेकार्ड सहभागीले बोकेका थिए भने जनचेतना फैलाउने पम्पलेटहरू वितरण गरिएको थियो ।
वार्तामा रहेको मोर्चाका तीनजना कार्यकर्ता धम्की दिंदै रकम माग गर्दा पक्राउ
प्रस, वीरगंज, १८ जेठ/ जिल्ला प्रहरी कर्यालय, पर्साले फोन मार्फत् धम्की दिई रकम असुल गर्ने कार्यमा संलग्न मधेसी मुक्ति मोर्चाका तीनजना कार्यकर्तालाई आज सार्वजनिक गरेको छ । जिप्रका पर्सामा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी फोन धम्कीमार्फत् रकम असुली कार्यमा लागेको आरोपमा प्रहरीले मधेसी मुक्ति मोर्चाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष बारा बहुअरी–४ निवासी महावीर यादव, वीरगंज उपमहानगरपालिका–११ निवासी श्यामसुन्दर पाण्डे, मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य बारा बलिरामपुर–४ निवासी रमेश पटेललाई सार्वजनिक गरेको हो । पक्राउ परेकाहरूबाट प्रहरीले ८ थान नेपाली र दुई थान भारतीय सिमकार्ड, विभिन्न व्यक्तिको फोटो, फोन नम्बरसमेत फेला पारेको प्रहरी उपरीक्षक पीताम्बर अधिकारीले बताए । प्रहरी उपरीक्षक अधिकारीले अभियुक्तहरूले हाल वीरगंज निवासी एक ब्यपारीलाई फोनबाट रकम माग गरी रकम नदिए ज्यान मार्ने धम्की दिएको कारण निजको उजुरीको आधारमा अनुसन्धान गरी पक्राउ गरिएको बताएका थिए । पत्रकार सम्मेलनमा प्रहरीले अभियुक्तहरूले व्यापारी, उद्योगी, कर्मचारीलाई फोन गर्दै मधेसी मुक्ति मोर्चाको नाउँमा रकम माग गर्ने गरेको जानकारी गराए
- विश्वराज अधिकारी आधुनिक नेपालको इतिहासमा देशवासी यसरी भ्रम र हिंसक मनोविज्ञानमा बाँचेको उदाहरण बिरलै होला । उदाहरणका लागि अहिले, नेपालीहरू एकातिर जातपात, छुवाछुतको विरोध गर्छन्, को सानो जात को ठूलो जात भन्ने भावनाको आलोचना गर्छन् अर्कोतिर जातीय राज्य चाहियो भनेर बन्द, हडताल आयोजना गर्छन् । एकातिर समावेशीको नारा लगाउँछन् अर्कोतिर यो तेरो प्रदेश यो मेरो प्रदेश भनी सीमा छुट्याउँछन् । एउटै व्यक्ति, एकै समयमा, खास राजनैतिक सङ्गठनको सदस्य हुन्छ, त्यही व्यक्ति एक खास जातीय सङ्गठनको सदस्य हुन्छ, फेरि त्यही व्यक्ति एक खास क्षेत्रीय सङ्गठनको सदस्य पनि हुन्छ । अर्थात् कुनै बेला सिद्धान्तको, कुनै बेला जातीयताको, अनि कुनै बेला क्षेत्रीयताको आधारमा मानिसहरू स·ठित भइरहेका छन् । बहुसङ्ख्यक नेपाली अहिले भ्रमको स्थितिमा छ । के गर्नु सही हो र के गर्नु गलत हो छुट्याउन सकिरहेको छैन । राजनैतिक वातावरणद्वारा जस्तो किसिमको सामाजिक मनोविज्ञानको निर्माण भइरहेको छ त्यसको पछि लागिरहेको छ, आफू स्वयंले, कुन कुरा सही र कुन कुरा गलत भनी छुट्याउन सकिरहेको छैन । यसैगरी वाक्स्वन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रताक
राजनीतक अस्थिरतामा पिल्सिएको श्रम बजार
- शीतलप्रसाद महतो आखिर जे नहुनुपर्ने थियो, त्यही भयो । दलीय हठ, सत्ता सङ्घर्ष र अदूरदर्शिताका कारण नेपाली जनता आफ्नो संविधान आफैं बनाएर समृद्ध नयाँ नेपाल निर्माण गर्न पाउने ऐतिहासिक अवसर प्राप्त गर्नबाट चुकेको छ । धेरै विषयमा सहमति भएर पनि राज्य पुनर्संरचनाको विषयमा परेको गाँठो फुकाउन नसक्दा संविधानसभा संविधान नै नबनाई विघटित हुन पुगेको छ । संविधानसभा स्वत: विघटन भएलगत्तै राष्ट्रपति, सरकार, राजनीतिक दल र ती दलहरूबीच बहुपक्षीय द्वन्द्व शुरु भएको छ । संविधानसभा विघटन भएपछि उन्पन्न राजनीतिक अन्योलले नेपाली श्रम बजार पुन: प्रसव पीडाबाट गुज्रनुपरेको छ । सबै नीतिको माउ नीति भनेको नै राजनीति हो । राजनीति ठीक नभएसम्म अरू कुनै पनि नीति ठीक हुन सक्दैन । त्यसको प्रत्यक्ष उदाहरण अहिले नेपाल बनेको छ । जीवनस्तरमा सुधार हुने अपेक्षासहित सर्वसाधारणको व्यापक जनसहभागितामा भएको २०६२/०६३ को दोस्रो आन्दोलन र त्यसपछिको मधेस आन्दोलन र त्यसले जन्माएको संविधानसभा निर्वाचनपछि स्वदेशी श्रम बजारमा नकारात्मक असर परेको देखिन्छ । राजनीतिक सङ्क्रमणका कारण लगानीमैत्री वातावरण बन्न नसक्दा निजी क्षेत्रका उद्
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुन प्रयोगको अपरिहार्यता
- वीरेन्द्रप्रसाद यादव सन् १९८० को दशकदेखि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अवधारणा शुरु भएपनि नेपालले अहिले आएर केही सकारात्मक पहल चालेको भन्न सकिन्छ । अपराधबाट आर्जित सम्पत्तिलाई वैध बनाउने र आतड्ढवादी कार्यमा लगानी गर्नेविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले महासन्धिमार्फत् अभियान चलाएको धेरै भइसक्यो । सो महासन्धिमा नेपाल सामेल भएदेखि नै वैधानिकरूपमा नेपाल यो अभियानमा लागेको भन्न सकिन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन संशोधन पारित हुनु, यस सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि व्यवस्थापिका–संसद्बाट अनुमोदन हुनु, छुट्टै सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग गठन हुनु वास्तवमा सकारात्मक पहल हो । यद्यपि विगतमा पनि नेपाल राष्ट्र बैकको एउटा एकाइले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विषय हेर्दै आएको र नेपाल प्हरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले छानबिन गर्दै आएको थियो । नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरणको सम्बन्धमा फडको मार्नुमा केही कारणहरू रहेको विज्ञहरू औंल्याउँछन् । यति नगरेको भए अन्तर्राष्टिय वित्तीय कार्यदल (एफटिएफ) का निर्देशन पालन नगरेको हुन्थ्यो जसले गर्दा कालो सूचीमा पर्ने सम्भावना थियो । कालोसूचीमा मुलुक नपरोस् भनेर यत्रो कद
यौन र श्रम शोषणमा महिला
- रेणु गुप्ता समय परिवर्तनसँगै मानिसको व्यवहार र सोच पनि परिवर्तन हुन्छ । मानिस जहिले पनि विकासतिर लम्कन खोज्छ तर विकासको नाममा कहिले राम्रो काम हुन्छ त कहिले नराम्रो कामसमेत हुने गर्दछ । राजनीति पनि मानव विकासको महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । देशमा धेरै राजनीतिक परिवर्तनहरू भएका छन् तर व्यवहारमा खासै परिवर्तनहरू हुन नसक्दा समाज खासै अगाडि बढ्न सकेको छैन । देशमा प्रजातन्त्र आएपछि धेरै क्षेत्रमा विकास र परिवर्तनहरू भएका छन् । महिलाले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पत्रकारिता, राजनीति क्षेत्रमा सहभागिता गर्दै अगाडि बढ्ने मौका पाएका छन् तर महिलामाथिको हिंसामा भने कमी आउन सकेको छैन । महिलाप्रतिको सोचमा सामान्य परिवर्तन आएको भएपनि समग्र दृष्टिकोण सकारात्मक हुन सकेको छैन । यदि कुनै महिला अगाडि बढ्न चाहन्छन् भने उनका अगाडि अनेक बाधा–अडचन तेर्सिन आउँछन् । पुरुषको तुलनामा महिलाले पाइलैपिच्छे सङ्घर्ष गनुपर्ने बाध्यतार चुनौती हुन्छ । समान कामको लागि समान ज्याला, रोजगारीमा समानुपातिक सहभागिता तथा निर्णायक र नीति निर्माण तहमा महिलाको पहुँचजस्ता पक्षमा निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका नेपाली महिला क
पशुपतिले देशलाई जोगाए
- राजेन्द्रप्रसाद केइराला अन्तत: प्रमुख राजनीतिक दलहरूको अकर्मण्यता र असहमतिका कारण संविधानसभा आइतवार राति १२ बजे स्वत: विघटन भएको छ । जनताको आशा र भरोसामा अवश्य पनि तुषारापात भएको छ । राष्ट्रले खर्चेको ९ अर्ब रकम व्यर्थ गएको छ । राज्य पुनर्संरचना अन्तर्गत प्रदेशको सङ्ख्या, नाम र सीमाका विषयमा सहमति नजुट्दा संविधान जारी हुन सकेन । ऐतिहासिक संविधानसभाबाट नयाँ संविधान घोषणा हुने जनअपेक्षा चकनाचुर भएको छ । संविधानसभाले गणतन्त्रको कार्यान्वयन र संस्थागत विकास तथा शान्ति प्रक्रिया निष्कर्षमा पुर्‍याउन सफल भए पनि नयाँ संविधान दिन सकेन । शासकीय स्वरूप, निर्वाचन प्रणाली, न्यायप्रणाली, नागरिकता, मौलिक हकलगायत विवादित मुद्दामा सहमति जुटेपनि सङ्घीयतामा सहमति हुन नसक्दा सबै आर्थिक, भौतिक, बौद्धिक र अन्तर्राष्ट्रिय लगानी खेर गएको छ । ऐतिहासिक संविधानसभाबिना उपलब्धि भ· हुनु अवश्य पनि दु:खदायी, पीडादायक र विडम्बनापूर्ण हो । यति हुँदाहुँदै पनि पछिल्लो समयमा सङ्घीयताको नाममा देशैभरि जुन किसिमको सामाजिक सद्भाव खलबलिन पुगेको थियो, त्यसले सम्पूर्ण विवेकशील देश र विदेशमा बसेका नेपाली जनता ज्यादै च
नेपालमा विगत केही दशकदेखि हत्या, हिंसा, लुटपाट, अपहरण, चोरी, डाँकाजनी सामान्य नै भइसकेको छ । यस्ता कुराहरू अब अखबार र पाठकका लागि औपचारिक खबर मात्र बन्ने गरेका छन् । तर पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा भएको चौधवटा ट्रक लुटिने घटनाले भने काल पल्कने डर उत्पन्न गराएको छ । लुटको त्यो तरिका लुटमार गर्नेहरूको संस्थागत कार्यनीतिको झझल्को दिने खालको छ । काठमाढौंबाट हिंडेको चौधवटा ट्रकलाई पहिले धादिङमा लुट्ने प्रयास गरियो । बेलैमा प्रहरी पुगेको हुँदा ट्रक लुटिन पाएन । प्रहरीले नारायणघाटसम्म स्कर्टिङ गरेर ट्रकलाई सुरक्षित छाडिदियो । अन्तत: नारायणघाट पारी नवलपरासी जिल्लाको डन्डा भन्ने ठाउँमा ती ट्रक लुटिए । ट्रकमा कसो लुटेराहरूलाई काम लाग्ने मूल्यवान वस्तु केही थिएन । तिनमा गधा र खच्चरमात्र लादिएका थिए । लुटेराहरूले ट्रक चालकसँग जनही रु. तीन र चार हजार लिए । हुनत प्रहरीले नारायणघाटबाट डन्डासम्म ट्रकहरूलाई स्कर्टिङ नगरेको पनि होइन । तर लुटेराहरूले निरन्तर दृष्टि राखेका थिए र प्रहरी फर्कनेबित्तिकै बीच ज·लमा रोकेर लुट मच्चाए । लुटपाट सामान्यझैं लाग्दछ । १४ वटा ट्रकबाट औसत चार हजार नै लुटेको भएपनि बढ
प्रहरीको सतर्कतापछि बिरामी भडकाई निजी अस्पताल लग्ने दलाली प्रथामा कमी
प्रस, वीरगंज, १७ जेठ/ नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा भर्ना हुन आउने बिरामीहरूलाई अस्पतालबाटै अन्यत्र लैजाने परिपाटीको विकास बढेपछि अस्पतालको आग्रहमा प्रहरीले कार्यवाही शुरु गरेको छ। नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालको प्रसूति र सर्जिकल वार्डहरूका बिरामीहरूलाई खासगरी अस्पतालमा रहेका केही दलालहरूले निजी क्लिनिक, नर्सिङ होममा लाने गरेको गुनासो आउन थालेपछि अस्पतालका मेसु डा. बिके झाले प्रहरी बिटलाई त्यस्ता दलालविरुद्ध कार्यवाही गर्न पत्राचार गरेको र प्रहरीले तदाकरुता देखाएपछि दलाली प्रथामा केही सुधार आएको बताइन्छ। अस्पतालमा उपचारका लागि आउने प्रसूति वार्डका बिरामीहरूलाई विभिन्न नर्सिङ होम, निजी क्लिनिकबाट खटाइएका दलालहरूले ललाइफकाई लाने गरेका थिए। प्रहरीले कार्यवाही शुरु गरेपछि तीन महिला र एक पुरुष पक्राउ परेका अस्पताल प्रहरी बिटले जनाएको छ। अहिले प्रहरी बिटले अस्पतालमा उपचार्थ आउने बिरामी र तिनका कुरुवाहरू गलत व्यक्तिको शिकार नबनून् भनेर अस्पतालका विभिन्न वार्ड र सिंढीघरमा सर्वसाधारणले सहज देख्नेगरी सूचना टाँस गरी दलालबारे सूचना दिन आग्रह गरेपछि दलाली प्रथामा कमी आएको बताइन्छ।
वन क्षेत्रको संरक्षणपछि बोट–बिरुवाको पुनरोत्पादन
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १७ जेठ/ सार्वजनिक स्रोत सम्पदाको संरक्षण गर्न श्रीसम्पत्ति नै खर्च गर्नुपर्छ भन्ने छैन । बेलैमा इमानदारीका साथ संरक्षण मात्र गरे पुग्छ भन्ने उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन्— बारा निजगढ १ र ६ को श्री जनज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले। आफ्नो कुल १९५.७८२ हेक्टर वन क्षेत्रमध्ये ५४ हेक्टरमा ४ वटा प्लटमा तारबार गरेर हजारौं कलकलाउँदो सालको बिरुवा स्वत: उम्रेर वनै हरियो भएको छ। वन समूहले दुई वर्ष अघिदेखि संरक्षण गरेको सो वन क्षेत्रमा साललगायत अन्य प्रजातिका बोट–बिरुवा उम्रेका छन्। संरक्षित प्लटमा झार–बुट्यान सफा गरी तारबारसहित करिब ३ लाख १५ हजार सामुदायिक वन समूहको खर्च भएको जनज्योति सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका युवा अध्यक्ष गणेशबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। शुरुमा खर्च त गरियो तर सोचेजस्तो बिरुवा पुनरोत्पादन हुने हो कि होइन् भन्ने आशङका थियो। अहिले वन विभाग, केन्द्रबाट पनि संरक्षणबाट पुनरोत्पादित बिरुवाहरू हेर्न आउँछन्। स्थानीय उपभोक्ता, छिमेकी सामुदायिक वनका उपभोक्ता, जिल्ला वन कार्यालय, केन्द्रले पनि राम्रो गरेको भन्ने गरेका छन् — अध्यक्ष कार्कीले भने ।
सिलाइ, कटाइ, बुनाइसँगै स्थानीय महिला स्वरोजगार तर्फ अग्रसर
जीतलाल श्रेष्ठ, निजगढ, १७ जेठ/ मुलुकको आर्थिक उन्नतिको जति मुख बजाएपनि आखिर पाखुरी नचलाई हुन्न भन्ने सन्देश जापान–चीनलगायत सम्पन्न राष्ट्रले उदाहरण दिइसकेका छन्। त्यसैले गाउँघर, बस्तीमा छरिएको जनशक्तिलाई एकीकृत गरी लगनशील श्रमलाई बेलैमा सदुपयोग गर्ने उद्देश्यले बारा डुमरवानाका ६ दर्जन महिला सामूहिक सिलाइ, कटाइ, बुनाइ गरिरहेका छन्। नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ बाराले सिर्जनशील आयमूलक स्वरोजगार कार्यबाट स्थानीय महिला समेटेपछि महिलाहरू स्वरोजगार हुँदै आएका छन् । करिब १० महिना अघि सैनिक सङ्घ बाराले डुमरवाना–४ सुन्दर बस्तीटोलमा ४ वटा मेशीनबाट थालनी गरिएको सिलाइ, कटाइ, बुनाइमा अहिले २० वटा सिलाई मेशीन छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय बारा, जिल्ला विकास समितिको कार्यालय बारा, नेपाल भूतपूर्व सैनिक सङ्घ केन्द्रीय कार्यालयले समेत सिलाइ मेशिन उपलब्ध गराएका छन्। बिहान बालबालिकालाई विद्यालय पठाएपछि ७२ जना महिलालाई दिनभर सिलाइ, कटाइ, बुनाइ गर्न भ्याइ नभ्याइ हुन्छ। तानमैं कपडा बुनेर स्कूले झोला, गलबन्दी, पछ्यौरा, ओढ्नी, बख्खु लगायत तयार पार्छन्। यसरी तयार पारिएको सामान स्थानीय बजार हँुद
आफूले पनि गर्न नसक्ने र अरूले गरिदिन थालेकोमा विभिन्न बाधा–व्यवधान हालेर काम हुन नदिने संस्कार हामीमा पलाएको छ। विदेशी मित्र राष्ट्रहरू वा दातृ संस्थाहरूले नेपालको दयनीय अवस्थालाई विचार गरेर विकासका पूर्वाधारलगायत आवश्यक क्षेत्रमा सहयोग पुर्‍याउन अठोट गरे तापनि हामी निजी स्वार्थवश त्यसलाई पूरा हुन दिदैनौं। प्राय: मित्रराष्ट्रहरूले सहयोग गर्न खोजेको काममा यस्तै छेस्किनी लगाउने गरिएको छ। हुलाकी सडकलाई तराईको जीवनरेखा मानिन्छ, त्यसको निर्माणबाट सबैभन्दा पहिले र धेरै लाभ तराईका बासिन्दालाई पुग्छ, तर मुआब्जाको निहुमा तराईको जीवनरेखा मानिएको हुलाकी सडक बन्नमा बाधा–विरोध तेस्र्याएर, मुआब्जाको सवाल खडा गरेर काम हुन नदिनु कतिसम्म जनविरोधी कार्य हो कसैलाई हेक्का छैन । जनतालाई त आफ्नो सम्पत्ति गुम्न लागेको पीर होला तर सरकारले पनि बाधा–अडकाउ फुकाउनेतिर नलागी वा बाधा उत्पन्न हुने ठाउँमा नै निर्माण योजना लागू गर्न खोज्नु उदेकलाग्दो मान्न सकिन्छ। यसले काममा विलम्ब हुन्छ, सहयोगकर्ताले थप खर्च बेहोर्नुपर्छ र देशको विकासको गति सुस्त हुन्छ । आज जुन ठाउँ भएर हुलाकी सडकको निर्माण हुँदैछ त्यो पहिल
श्रीमन्नारायण मिश्र केही अघि नेपाली मिडियामा एउटा समाचारले निकै चर्चा र महत्त्व पाएको थियो। वीरगंजस्थित भारतको महावाणिज्य दूतावासका राजनीतिक मामिला हेर्ने एक कर्मचारीले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई आन्दोलनका निम्ति सुझाव दिएको र मधेसको विभाजन हुनुहुँदैन भन्ने आफ्नो आशय प्रकट गरेको कारण उनले कूटनीतिक मर्यादाविपरीत काम गरेको भन्दै व्यापक विरोध भएको छ। नेपाल सरकारले पनि यस विषयमा गहन छानबिन नै नगरी हतारमा काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतलाई मन्त्रालयमा बोलाएर आफ्नो आक्रोश, असन्तुष्टि र गुनासो पोख्यो। यस विषयमा सरकारले सुझबुझका साथ दूरदर्शिताको प्रदर्शन गर्नुपर्दथ्यो तर नेपालको यसमा कूटनीतिक असफलता देखियो। प्रथमत: ती कर्मचारीको निम्तो आफू समक्ष किन आयो ? ती कर्मचारीसँग डिनर पार्टीमा सहभागी एमालेका नेताहरूको सम्बन्ध, व्यवहार र उठ्बस कतिको थियो ? कुनै इष्र्या र पूर्वाग्रहका कारण तिनलाई फसाउने काम त भएको होइन ? एमालेका ती कार्यकर्ताहरूको कुनै निहित स्वार्थ पूर्ति नभएको कारण त यस विषयलाई विवादित बनाइएको होइन। सम्बद्ध कर्मचारी, काठमाडौंस्थित भारतीय राजदूतावास र भारतको विदेश मन्त्रालय सम
जग्गा मुआब्जा प्रकरणले विवाद निम्त्याएपछि हुलाकी सडक निर्माण कार्य प्रभावित
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ भारत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य मुआब्जा विषयमा अलमलमा परेर प्रभावित भएको छ । मुआब्जाका लागि पहिलो चरणमा प्राप्त रु. १० करोड रकममध्ये २५ प्रतिशत पनि वितरण हुन नसकेको पर्साका प्रजिअ शम्भु कोइरालाले बताए । उनले मुआब्जा वितरण गर्नुपर्ने स्थानका जग्गाधनीहरूले बैंक आदिबाट ऋण कर्जा लिएको कारण सोको शोधभर्ना गरी फुकुवा नहुन्जेल मुआब्जा दिने काम प्रभावित भएको हो । बैंकमा धितो राखिएका ती जग्गाको मुआब्जा दिई जग्गामा निर्माण काम थाल्दा बैंकको लगानी जोखिममा पर्ने हुँदा राज्यलाई घाटा हुनेगरी मुआब्जा दिने काम तत्काललाई रोकिएको बताए । पर्साको ग्रामीण क्षेत्रमा हुलाकी राजमार्ग निर्माण हुने जग्गाको मूल्याड्ढन समितिले घडेरी जग्गा प्रतिकठ्ठा २ लाख र सरेह खेत ५० हजार तोकेको छ । हुलाकी राजमार्ग अन्तर्गत पर्सा जिल्लाको बहुअर्वाभाठा, लखनपुर, रामनगरी, शिबर्वा, औराहा, निचुटा, जगरनाथपुर, सुपौली, जीतपुर, सेढवा, सुवर्णपुर, महादेवपट्टी, ठोरीलगायत गाविसको मुआब्जा वितरण हुन नसकेको बताइएको छ । पहिलो चरणमा माथि उल्लिखित गाविसहरूमा मुआब्जा वितरण गर्न
प्रतिबन्धित भारु नोटसहित पक्राउ परेका व्यक्ति काठमाडौं चलान
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साले नेपालमा प्रतिबन्धित भारु. ५ सय र हजारको ३ लाख रकमसहित पक्राउ परेका दुईजना व्यक्तिलाई राजस्व अनुसन्धान विभाग बबरमहल काठमाडौं पठाएको बताएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय, पर्साका प्रवक्ता एवं प्रनाउ रवीन्द्र केसीले अजयकुमार साह र सुरेश साहलाई भारु तीन लाखसहित पक्राउ गरेकोमा आज राजस्व अनुसन्धानमा पठाएको बताए । तर पर्सा प्रहरीले जेठ १३ गते भारु तीन लाखसहित वीरगंजको पशुपति मार्केटमा रहेको मनी चेन्जरका सञ्चालक जितेन्द्र तिवारी पक्राउ परेको समाचार दिएको थियो । तीन लाख भारूसहित सञ्चालक तिवारी पक्राउ परेको तीन दिनपछि सोही परिमाणको रकमसहित साहद्वय पक्राउ परेको प्रहरीबाट पुष्टि गरिनुले निजहरूलाई कारबाईको लागि राजस्वमा पठाइएको कुरा विवादास्पद देखिएको छ । प्रहरीले कानुनी प्रक्रियाको लागि अस्तिको मितिमा पक्राउ गरेको र हिजो पठाएको बताए पनि वास्तवमा मनी चेन्जरका संचालक तिवारीलाई जोगाएर घटनाका पात्र नरहेका साहद्वयलाई अपराध कबुल गराउन खोजिएको त होइन भन्ने शड्ढा बढेको छ । प्रहरीले भने त्यसो नभएको दाबी गरेको छ । प्रहरीले बताएअनुसार भएको हो भने
२०४७ सालको संविधान ब्युँताई राजतन्त्र ल्याउन माग
प्रस, वीरगंज, १६ जेठ/ राजसंस्था पुनस्र्थापना सङ्घर्ष समिति, पर्सा वीरगंजले आज पत्रकार सम्मेलन गरी संविधानसभा विघटन भएको वर्तमान अवस्थामा २०४७ सालको संविधान जारी गरिनुपर्ने माग अघि सारेको छ । समितिका अध्यक्ष राजकिशोर चौबेले २०४७ सालको संविधान लागू गर्नु उपयुक्त हुने बताए । उनले २०४७ सालको संविधान जारी भएर राजसंस्था पुनस्र्थापना नगरेसम्म आन्दोलन यथावत राख्ने बताए । उनले संविधानसभा विघटन भइसकेको कारण राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले वैधानिक र नैतिक आधार गुमाइसकेका हुँदा पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने बताए । समितिका अध्यक्ष चौबेले चार वर्षमा संविधान बनाउन नसकेको वर्तमान संविधानसभाको विकल्पमा अर्को निर्वाचन गरेपनि सोबाट पनि निकास ननिस्किने दाबी गरे । उनले संविधानसभाको चुनावदेखि मस्यौदा लेखन कार्यसम्म भएका खर्चहरूको नैतिक जिम्मेवारी दलहरूले लिनुपर्ने बताए । अबको अवस्थामा पनि संविधानसभाको चुनाव गराए व्यर्थको खर्च हुने उनको भनाइ थियो ।
बाढीले खेतीयोग्य जमीनमा बालुवा थुपार्‍यो, पलायो काँसघारी प्राकृतिक स्रोत साधनको विनाश, क्रसरले थप्यो झन् पीडा
जीतलाल श्रेष्ठ, बारा, १६ जेठ/ परार साल आएको बाढीले खेतीयोग्य फाँट बालुवाले पुरिएर मरुभूमिमा परिणत भएपछि अहिले काँसघारी बाक्लिंदो छ । बारा डुमरवानामा रहेको चिनी मिलको सयौं हेक्टर जमीन खोला कटानबाट जोगाउन २७ वर्ष अघि चुरेमैं मूलधार परिवर्तन गरिएपछि बालग·ा खोला नजिकैको मनहर्वा गाविसको डेढ सय बिघाभन्दा बढी खेतीयोग्य जमीन परार साल बालुवाले पुरेको हो । बालग·ाको बाढीले डुमरवानाको धर्मनगर, बदाफर, खोर, पचुलीलगायत बस्तीमा केही वर्ष अघिदेखि बर्सेनि बाढी पसेपछि मानवीय बस्तीसमेत अन्यत्र सार्न स्थानीय बाध्य भएका थिए । चुरे भएर बग्ने बालग·ा, पसाहा र दुधौरा खोलाको मूलधार अमलेखगन्जमैं परिवर्तन गरिदिएपछि फड्को मारेर वारपार गर्न सकिने पैनीले जमीन कटान गर्दै खेतीयोग्य जमीनलाई बगरमा परिणत गरेको थियो । झन्डै ३०/३५ वर्ष अघि फड्को मारेर तर्न सकिने यही बालग·ा खोलाले ८/१० वर्ष अघिदेखि धेरैलाई उठिबास लगाउँदै परार पसेको बाढीले धान, मकैं बाली झुल्ने खेतलाई मरुभूमि बनाइदियो– मनहर्वा–६ की ५० वर्षीया पवित्रा तिमल्सिनाले भनिन् । बाढीले धेरैलाई बेघरबार बनाएपनि चुरे अमलेखगन्ज वरिपरि क्रसर उद्योग सञ्चालनले उनीहरूलाई
मैले नबुझेको आन्दोलन
–कुमार रुपाखेती २००७ सालमा राणाहरूको चङ्गुलबाट मुलुकलाई बचाउन आन्दोलन भयो । २०१७ सालमा स्व. राजा महेन्द्रले सक्रिय राजतन्त्रका निम्ति ‘कू’ गरे । २०४६ सालमा प्रजातन्त्रका खातिर आन्दोलन भयो र २०६२/०६३ मा ज्ञानेन्द्र हटाउन र गणतन्त्र ल्याउन आन्दोलनको हुरी बतास ल्याइयो । यी आन्दोलनहरू सबैले बुझ्ने खाले नेपाली आन्दोलन थिए । अहिले पनि मुलुक चर्को आन्दोलनको भँवरमा फसेको छ । करिब दुई हप्तादेखि चर्केको आन्दोलनमा मुलुकका सबै क्षेत्र ठप्प छन् । तर यो आन्दोलनलाई मैले बुझ्न सकेको छैन । प्रमुख राजनैतिक दलहरूको काबुबाहिर गइरहेको यो आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्ने बुता कुनै पनि दलहरूसँग छैन । मुलुकको ससाना भूभाग र ससाना शक्तिहरू आआफ्नै स्वार्थलाई प्राथमिकता दिंदै सरकारी संयन्त्रलाई चुनौती दिंदै अराजक किसिमले आन्दोलनको नाममा सक्रिय छन् । यो एउटा यस्तो अराजक आन्दोलन साबित भएको छ, जसको कुनियतको शिकार अधिकांश मिडिया र पत्रकार बनेका छन् । पत्रकारहरूलाई प्रमुख दुश्मन ठान्दै सञ्चालित यो देशव्यापी आन्दोलनको प्रकृति पनि विचित्रको छ । ‘राम तेरी ग·ा मैली हो गइ’ भनेझै वर्तमान आन्दोलनले नेपाली आकाश रङ्मगिएको छ ।
- विनोद गुप्ता एउटा लघुकथा यस्तो छ– एकजना सधैं रक्सी खाने मान्छेलाई पेटमा सार्‍है तकलिफ भएर नाम चलेको एउटा चिकित्सककहाँ पुगी आफ्नो रोगबारे भनेछ । उसले भनेको सबै कुरा सुनेर चिकित्सकले उसलाई मदिरा नखाने सल्लाह दिएछन् । तर चिकित्सकको सल्लाहबाट चित्त नबुझेर यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर सल्लाह मान्न इन्कार गरेछ । तर चिकित्सकले आफ्नो कुरा सही हो भनेर बताउन एउटा गिलासमा केही स्पिटर पानी हालेर मदिरा बनाएछन् र एउटा कमिलालाई त्यस मदिरा भएको गिलासमा राखेर रोगीलाई हेर भनेछन् । केही बेरपछि कमिला मरेछ र चिकित्सकले रोगीलाई सम्झाउँदै हेर रक्सी खाएपछि यसरी मरिदो रहेछ थाहा पायौं । रोगीले हो डाक्टर साहेब बुझें मदिरा खाएपछि जीउभित्रका सबै कीराहरू मर्दोरहेछ भनेपछि चिकित्सकले आफ्नो टाउको समातेछन् । ठ्याक्कै यही प्रस· नेपाली राजनीतिको भएको छ । राजनीतिलाई सबैले विज्ञानको दर्जा दिएका छन् । विज्ञान स्थापित सत्य तथ्यमा आधारित हुने भएकोले नै राज अथवा शासनसँग नीति शब्दलाई जोडेर राजनीति शब्द बनेको हुनुपर्दछ । नीति (एयष्अिथ) भनेको गाइड लाइन हो जसलाई आवश्यकताअनुसार प्रयोग गरियो भने सफल अवतरणको सम्भावना बढी हुन्छ
सभासद् बन्न सकेनन्
हिजोसम्म यस्तो संविधान चाहियो, उस्तो संविधान चाहियो भनेर प्रचण्ड गर्मीको पनि वास्ता नगरी, अहर्निश बन्द, हडताल चलाएर, विभिन्न पीर–सास्ती सहेर देशलाई सुव्यवस्था प्रदान गर्ने संविधानको आशमा बसेको नेपाली जनतालाई किंकर्तव्यविमूढ र्र तमाम संरचना ध्वस्त पार्दै देशलाई पुन: चार वर्ष अगाडिको अवस्थामा पुर्‍याइएको छ । यस्तो हुनुमा कसको दोष कसैले जिम्मा लिन चाहेको छैन । तर जनता भने ६०१ जना सभासद्लाई यसका लागि जिम्मेदार ठानेर उनीहरूको उछित्तो काढ्न थालेको छ । कहीं सभासद्हरूलाई समाज बहिष्कार गर्ने कुरा उठिरहेको छ भने कहीं उनका पुतला जलाइँदै छ । निश्चय नै सभासद्हरूले संविधान बनाउने वाचा–कबोल गरेका थिए । त्यसका लागि उनीहरूले गरीब नेपाली जनताको रगत–पसिनाको कमाइको अर्बौं रुपियाँ आफ्नो सुख–सुविधाका लागि उपभोग पनि गरे । तर तमाम उपकरण र साज–सामान हुँदाहुँदै पनि युद्धमा हारेका सैनिकझैं उनीहरू घर फर्के । उनको चिन्ता संविधान बनाउनु नसक्नुमा होइन, सुख–सुविधा खोसिनुमा देखिएको छ । किनकि उनीहरू संविधान बनाउने चेष्टामा कहिले पनि लागेनन् । उनीहरूले आफ्नो स्वार्थी नेताहरूको अभिव्यक्तिमा थपडी मार्ने काममात्र गरे
संविधान नबनाउने सभासद्विरुद्ध जनता सडकमा ओल्र्यो, पुतला दहन, समाज बहिष्कारको माग
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ संविधानसभाको हत्या गर्ने ६०१ जना सभासद्हरूको समाज बहिष्कार गर्नुपर्ने सहभागीहरूले बताएका छन् । स्वतन्त्र मधेसी फोर्सले आयोजना गरेको विरोधसभामा सो विचार व्यक्त गरिएको थियो । मत लिएर संविधान बनाउन गएका सभासद्हरू संविधानसभाको हत्या गरी फर्किरहेको बेला उनीहरूलाई कानुनले हैन जनताले दण्डित गर्नुपर्छ । कुर्सीको लडाइँ तथा आपसी रिसइबी साथ बिताएको ४ वर्षको समयमा खाए–पकाएको भत्तासमेत सभासद्हरूसँग असुल गर्न फोर्सलाई सहयोग गर्न वक्ताहरूले आग्रह गरेका थिए । स्वतन्त्र मधेसी फोर्स जिल्लाका अध्यक्ष प्रमोदप्रसाद कुर्मीको सभापतित्वमा शुरु भएको विरोधसभामा केन्द्रीय अध्यक्ष प्रदीप विश्वकर्मा, पूर्व अध्यक्ष कृष्णा पटेल, विनोद कुशवाहा, रामनारायण साह, जेपी साहलगायतले मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए । त्यसैगरी मधेसी जन अधिकार फोरमले सभासद्हरूलाई कारबाईको माग गर्दै आज वीरगंजमा विरोध र्‍याली प्रदर्शन गरेको छ । घडिअर्वाबाट निस्केको विरोध र्‍याली सभासद्हरूलाई देश निकाला गर, भत्ता फिर्ता गर, जनतालाई धोका दिन पाइँदैन जस्ता नारा लगाउँदै घण्टाघरमा पुगी कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
भन्सारको अनियमितता नेपाल प्रहरीले खोल्दै
प्रस, वीरगंज, १५ जेठ/ मूल भन्सार कार्यालय, वीरगंजमा भइरहेको भ्रष्टाचारको पोल नेपाल प्रहरीले खोल्न थालेपछि अहिले भन्सार कर्मचारीहरूबीच खैलाबैला मच्चिएको छ । मूल भन्सारले चेकजाँच गरी छोडेको इलेक्ट्रोनिक सामान नेपाल प्रहरीले पक्राउ गर्न थालेपछि भन्सार कर्मचारीहरूले गरिरहेको अनियमितता आज पुन: साबित भएको छ । भंसारबाट पास भइआएको टायर गाडा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिंदा त्यसमा पंखा, ग्याँस लाइटर, रेगुलेटरलगायत सामान छन् । २९ सय थान ग्याँस लाइटरमध्ये ६ सय थानको भन्सार काटिएको छ भने १३५० थान ग्याँस रेगुलेटरमा ४ सय थानकोमात्र भन्सार बुझाएको देखिन्छ । त्यतिमात्र होइन प्रज्ञापनपत्रमा लाइटरको रु ९/–, रेगुलेटर रु १३/–को दरले भन्सार बुझाएको छ । त्यति मूल्य दाबी गरी प्रज्ञापनपत्र भर्दा भन्सार कर्मचारीले कसरी राजस्व बुझे प्रश्न खडा भएको छ । वीरगंज घडिअर्वा आरबी इन्टरप्राइजेजका सञ्चालक रामाशड्ढरप्रसाद कलवारको नाउँमा सो सामान भारतबाट निर्यात भएको वडा प्रहरी कार्यालयबाट बिर्ताका इन्चार्ज प्रहरी निरीक्षक सुजन जोशीले बताए । भन्सार मूलगेटबाट टायर गाडा पक्राउ गरेको प्रहरीले जनाएको छ
संविधान सभा असफलतामा विदेशी चलखेलको आरोप र अबको बाटो
अधिवक्ता वीरेन्द्र प्रसाद यादव चार वर्षको अवधि व्यर्थमा बिताएर सार्वभौम अधिकारसम्पन संविधानसभा अन्तत: विघटन भएको छ । संविधानसभा विघटनको पीडा आम जनतालाई असहनीय भएकैे बेला अझ पीडा थपिने काम हुँदैछ । यसले नेताहरू जनताप्रति अलिकतिपनि जिम्मेवार नरहेको पुष्टि हुन्छ । किनभने अहिलेपनि झगडै गर्न तम्सिएका छन् । राजनीतिक नेतृत्वले एकजुट भएर आफ्नो अपराधको क्षमायाचना गर्नुपर्नेमा आपसमा विवाद गरेर जनताको घाउमा नुन छर्ने काम गरिरहेका छन् । अबको सहज र वैधानिक निकास के हुन सक्छ भन्नेतर्फ चिन्ता नगरी मुलुकमा मुठभेडको अवस्था सिर्जना गर्न तल्लीन भएका छन् । विघटनपछि प्रधानमन्त्री आफैंलाई सर्वेसर्वा ठानेका छन् भने काङ्ग्रेस, एमाले राष्ट्रपतिलाई उक्साउने प्रयासमा छन् । संविधानसभा विघटनपछि प्रधानमन्त्रीले अर्को निर्वाचनको मिति घोषणा गरेका छन् । यसलाई सबैले सघाउ पुर्‍याउनुपर्नेमा अनावश्यक विवाद उठाएका छन् । उचित कानुनी मार्ग देखाउनुपर्नेमा विद्वान्हरूले पनि विवाद उठ्ने खालका विश्लेषण गरिरहेका छन् । यसले प्रम र राष्ट्रपतिबीच मात्र होइन दलहरूबीच पनि शक्तिसङ्घर्ष चर्काउने छ । यो झन् भयावह अवस्था हो । वास्तवम
गणतन्त्र कि नैराश्यतन्त्र
नेपाली गणतन्त्रले पाँचौं जन्म दिवस मनाइरहँदा पनि यसको न्वारान हुन सकेन । अनाम बालक सबैको उपहासको पात्र हुन्छ । गणतन्त्रलाई नाम दिने र संस्थागत गरी नयाँ शासन पद्धतिअनुसार देशलाई अग्रसरता दिलाउने आशामाथि आइतवार मध्यरात तुषारापात भयो । ६०१ जना सभासद्हरूले जनताको रगत–पसिनाको अर्बौं रुपियाँ डकारेर नेपाली गणतन्त्रलाई नाम दिन सकेनन्, पुन: अर्बौं रुपियाँबाट आफ्नो बासथलोलाई धरातलीय सुदृढता प्रदान गर्नेगरी संविधान बनाउनकै लागि संविधानसभा निर्वाचनको घोषणा गरे । यस घोषणामा प्रत्यक्षत: सबै सभासद्को सहभागिता नरहेको भए तापनि अन्तत: लाभान्वित हुने उनीहरू नै हुनेछन् भन्ने कुरामा कसैको विमति नहोला । नेपालमा एक्लो राजनेताको अभाव खटकिरहेको बेला सामूहिक नेतृत्व, शीर्ष दलका नेताहरूले सो अभाव पूर्ति गर्लान् भनेको पनि बालुवा पेलेर तेल निकाल्ने प्रयासझैं निष्फल हुन पुग्यो । संविधान जारी गर्न विभिन्न विकल्पहरू रहँदारहँदै संविधानसभाको म्याद समाप्त हुन्जेल गरिष्ठ मनोभावका वरिष्ठ नेपाली नेताहरूको हठले संविधान निर्माण कार्यलाई दक्ष प्रजापतिको यज्ञ बनाइछाडयो । आइतवार रातिको अप्रत्याशित निर्णयले आम नेपाली जन
संविधानसभाको चुनाव गर्ने निर्णय प्रमद्वारा राष्ट्रको नाम सम्बोधन
काठमाडौं, १४ जेठ/रासस संविधान जारी गर्ने विषयमा राजनीतिक दलहरूबीच सहमति हुन नसक्दा मन्त्रिपरिषद्ले आज संविधानसभाको अर्को निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेको छ । सो निर्णयको जानकारीलगत्तै राष्ट्रपति ड. रामवरण यादवलाई गराएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निवास बालुवाटारमा राष्ट्रको नाम सन्देश दिंदै संविधान बनाउने प्रक्रियामा भएका कमी कमजोरीका लागि जनतासँग माफी माग्दै संविधानसभाको पुन: निर्वाचन गराउने अप्रिय निर्णय गर्नुपरेको बताएका छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विभिन्न कारणले संविधान जारी गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम उक्त निर्णय गरेको हो । मन्त्रिपरिषद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्न नसकेकोमा नेपाली जनतासमक्ष क्षमा माग्दै निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको बताए । राजनीतिक दलहरू सहमतिमा नआएका, सड्ढटकाल लगाएर संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा पनि राष्ट्रिय सहमति नभएकोले एनेकपा (माओवादी) र मधेसी मोर्चाले मात्रै उक्त अप्रिय निर्णय गर्न नसक्ने भएकाले उत्तम विकल्प निर
बन्दले वीरगंजको जनजीवन ९ औं दिनपनि प्रभावित १ महिलाप्रहरीसहित डेढ दर्जन प्रदर्शनकारी घाइते
प्रस, वीरगंज, १४ जेठ/ बृहत् मधेसी मोर्चाले आह्वान गरेको अनिश्चितकालीन तराई बन्दको आज ९ औं दिन वीरगंजमा प्रहरी र प्रदर्शनकारीबीच भीडन्त हुँदा एकजना महिला प्रहरीसहित डेढ दर्जनभन्दा बढी प्रदर्शनकारी घाइते भएका छन् । वीरगंज, घण्टाघरस्थित विपी उद्यानबाट दिउँसो बृहत् मधेसी मोर्चाले लाठी जुलुस प्रदर्शन गर्दा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो । प्रहरी हस्तक्षेपको बावजुद क्राउन प्लाजा होटलसम्म पुगेको लाठी जुलुसले प्रहार गरेको ढु·ा लागी महिला प्रहरी अप्सरा दर्जी घाइते भएपछि प्रहरीले प्रदर्शनकारीहरू माथि लाठी प्रहार गरेको थियो । प्रहरीको लाठी प्रहारबाट फोरमका नेता वीरेन्द्र यादव, केन्द्रीय सदस्य विन्देश्वर यादव, युवा नेता फिरोज मन्सुरलगायत श्यामकिशोर तिवारी, बालकुमार साह, सतन महतो, रावडी देवी, हरेन्द्र ठाकुर, छोटेलाल साह, मोहन गोढ, शिवशड्ढर राउत, पवन साह, सगीर अन्सारी र मनोहर अन्सारीलगायत घाइते भएका थिए । घाइतेको उपचार नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पतालमा गरिएको थियो । उपचारपछि घाइतेहरू पुन: प्रदर्शन स्थल पुगेर लाठी जुलुस निकालेका थिए । उनीहरूले प्रहरी दमनविरुद्ध आम नागरिक चुप लागेर बसेको भन्
यसरी सकियो संविधानसभाको अवधि
काठमाडौं, १४ जेठ/रासस नेपालकै इतिहासमा पहिलोपटक जननिर्वाचित संविधानसभाको अवधि मुलुकमा नयाँ संविधान घोषणा नगरी आज राति १२ बजे समाप्त भएको छ । शुरुमा दुई वर्षका लागि अवधि तोकिएको संविधानसभालाई प्रमुख दलहरूको सहमतिमा अन्तरिम संविधान संशोधनमार्फत् पटकपटक समय थप गर्दै पछि दुई वर्ष गरी कुल अवधि चार वर्ष बनाइएको थियो । गत २०६८ मङ्सिर ९ गते सर्वाेच्च अदालतले अन्तिम पटक छ महिनामात्र अर्थात् २०६९ जेठ १४ गतेका लागि मात्रै अवधि थप्न सक्ने फैसला दिएपछि संविधानत: आज रातिदेखि संविधानसभाको अवधि सकिएको छ । तत्कालीन सात राजनीतिक दल र विद्रोही नेकपा (माओवादी) बीच २०६१ साल मङ्सिर ७ गते भएको १२ बुँदे सहमतिमा संविधानसभाद्वारा जनताको संविधान निर्माण गर्ने उल्लेख गरिएको थियो । सो सहमतिका आधारमा मुलुकमा सञ्चालित शान्तिपूर्ण दोस्रो जनान्दोलन (२०६२/०६३) सफल भएपछि २०६३ मङ्सिर ५ गते सरकार र माओवादीबीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो । जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न नेपालमा २०६४ साल चैत २८ गते संविधानसभा निर्वाचन भएको थियो । सभाको पहिलो बैठकले २०६५ जेठ १५ गते राजत
विद्यार्थीहरूका लागि समय व्यवस्थापन–६
- अनन्तकुमार लाल दास शेक्सपीयरले भनेका थिए,“मैले समय नष्ट गरेको छु, अब समयले मलाई नष्ट गर्दैछ ।” संसारमा जति पनि महापुरुषहरू भएका छन् सबैको सफलताको रहस्य समयको सदुपयोग नै हो । सही भन्ने हो भने व्यर्थमा समय खेर फाल्नेलाई समयले सफलताबाट वञ्चित गरिदिन्छ । यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने हामी सफलता वा असफलता जे हासिल गर्छौं त्यो समयको देन हो । यहींनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरो के हो भने समय जीवनका लागि हो, जीवन समयको लागि होइन । अर्को शब्दमा भन्ने हो भने विद्यार्थीहरूका लागि पढाइ अति आवश्यक छ तर पढाइ नै सबैथोक होइन । अतएव समय–तालिका बनाउँदा केही समय खाली राख्नुपर्छ । खाली समय भन्नाले दैनिक कार्यबाट बचेको समयलाई जनाउँछ । यो खाली समय व्यक्तित्व निर्माण, भावनात्मक शक्तिको विकास र मस्तिष्कको क्षमता वृद्धिका लागि धेरै आवश्यक पर्छ । यदि तपाईंसँग खाली समय छैन भने केही समय खाली राख्न समय–तालिकामा सुधार आवश्यक छ । यो यस कारण पनि आवश्यक छ किनभने व्यावहारिक जीवनमा किताब होइन व्यक्तित्वले काम गर्छ । जसले आफ्नो पूरा विद्यार्थी जीवन मात्र पढ्नमा बिताउँछ उसलाई व्यावहारिक जीवनमा धेरै अप्ठेरो महसुस गर्नुपर्ने क